Hlola i-United Arab Emirates - World Tourism Portal
Hlola i-United Arab Emirates
Uhlu Lamagugu Womhlaba Wonke we-Unesco.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-UAE
Bukela ividiyo mayelana ne-UAE
Hlola i-United Arab Emirates ngesinye isikhathi ibizwa nje ngokuthi i-Emirates, izwe elise Ntshonalanga Asia ekugcineni eningizimu-ntshonalanga yeNhlonhlo yase-Arabia ePersian Gulf, emngceleni Oman empumalanga neSaudi Arabia ngaseningizimu, kanye nokwabelana ngemingcele yasolwandle ne-Qatar entshonalanga ne-Iran ngasenyakatho. Umbuso wobukhosi obusezingeni eliphakeme umfelandawonye wezempi eziyisikhombisa ezakhiwe Abu Dhabi (esebenza njengenhloko-dolobha), Ajman, Fujairah, I-Ras Al Khaimah, Sharjah futhi Umm Al Quwain.
Imingcele yabo iyinkimbinkimbi, enezinto eziningi ezivalekile ngaphakathi kwama-emirates ahlukahlukene.
Ukuhlala kwabantu kwe-UAE yamanje kudalwe emuva emuva kokuqubuka kwabantu besimanje abavela e-Afrika abanye be-125,000 BCE ngokutholakala esizeni seFaya-1 eMleiha, eSharjah. Izindawo zokungcwatshwa ezisusela ku-Neolithic Age kanye ne-Bronze Age zifaka indawo yakudala eyaziwa njengale ndawo eseJebel Buhais. Eyaziwa ngokuthi nguMagan kumaSumerians, le ndawo yayiyikhaya lesiko elichumayo lokuhweba ngeBronze Age ngesikhathi se-Umm Al Nar.
Isimo sezulu se-UAE sishisekela phansi-sifudumele ngamahlobo asishisayo nobusika obufudumele.
I-UAE inekhodi yokugqoka enesizotha. Ikhodi yokugqoka iyingxenye DubaiUmthetho wobulelesi. Izitolo eziningi e-UAE zinekhodi yokugqoka eboniswa ezindaweni zokungena. Ezitolo ezinkulu zeDubai, abesifazane bayakhuthazeka ukuba bopha amahlombe namadolo. Kepha abantu bangagqoka izimbotshana emachibini nasemabhishi.
Abantu bayacelwa futhi ukuthi bagqoke izingubo ezinesizotha uma bengena kuma-mosque, anjenge-Sheikh Zared Mosque e-Abu Dhabi. Ama-mosque avulekele izivakashi ahlinzeka ngezingubo zokugqoka ezifanele amadoda nabesifazane uma kudingeka.
Ukugxekwa kukahulumeni akuvunyelwe. Ukugxekwa kwezikhulu zikahulumeni namalungu omndeni wasebukhosini akuvunyelwe. Amagama asejele anikezwe labo 'abahlambalaza noma balimaze' idumela lombuso futhi 'ababonisa ukwedelela' inkolo.
Isikhumulo sezindiza i-Dubai International Airport sasiyisikhumulo sezindiza esiphambili kunazo zonke emhlabeni ngabagibeli bamazwe omhlaba e2014, sadlula eLondon Heathrow. Ujantshi obanzi we-1,200 km (750 mi) wezwe lonke wakhiwa ozoxhumanisa wonke amadolobha namachweba amakhulu. IDubai Metro iyinethiwekhi yokuqala yezitimela yasemadolobheni eNhlonhlo yase-Arabia. Amachweba amakhulu e-United Arab Emirates yiKhalifa Port, Zared Port, Port Jebel Ali, Port Rashid, Port Khalid, Port Saeed nasePort Khor Fakkan.
I-Abu Dhabi, i-Dubai, iSharjah, Ajman, Umm Al Quwain, noRas Al Khaimah baxhumene nomgwaqo omkhulu we-E11, okuwumgwaqo omude kakhulu e-UAE. E-Dubai, ngaphezu kwe-metro, iDubai Tram nePalm Jumeirah Monorail futhi kuxhuma izingxenye ezithile zedolobha.
Ukudla kwendabuko kwe-Emirates bekuhlala ilayisi, inhlanzi nenyama. Abantu base-United Arab Emirates bamukele ukudla kwabo okuvela kwamanye amazwe aseNtshonalanga naseNingizimu Asia kubandakanya i-Iran, Saudi Arabia, Pakistan, India ne-Oman. Ukudla kwasolwandle bekulokhu kungukudla kwe-Emirati amakhulu eminyaka. Inyama nelayisi kungokunye ukudla okuyisisekelo, okunamawundlu nama-mutton ancamela imbuzi nenyama yenkomo. Iziphuzo ezidumile yikhofi netiye, ezingahanjiswa nge-cardamom, isafroni, noma iminti ukubanikeza ukunambitheka okuhlukile.
Izitsha ezithandwayo zamasiko ama-Emirati afaka uthukile, imishini, khubisa, khameer futhi chabab isinkwa phakathi kwabanye ngenkathi iLugaimat iyisinkwa esidumile se-Emirati.
Ngomthelela wesiko lasentshonalanga, ukudla okusheshayo sekudume kakhulu phakathi kwentsha, kuze kube yilapho imikhankaso ibanjiwe yokuqokomisa ubungozi bokweqisa kokudla ngokweqile. Utshwala buvunyelwe ukuthi buthunyelwe ezindaweni zokudlela zamahhotela kuphela. Onke ama-nightclub bavunyelwe ukuthengisa utshwala. Izitolo ezinkulu ezithile zingathengisa utshwala, kepha le mikhiqizo ithengiswa ezingxenyeni ezihlukile. Ngokufanayo, ingulube, okuyi-haram (ayivunyelwe amaSulumane), iyathengiswa ezingxenyeni ezihlukile kuzo zonke izitolo ezinkulu. Qaphela ukuthi yize kungaphuzwa utshwala, akukho emthethweni ukuthi uphuzwe esidlangalaleni noma ushayela imoto enenoma iluphi utshwala egazini.
IFomula One idume kakhulu e-United Arab Emirates, futhi minyaka yonke ibanjelwa kuYas Marina Circuit. Umjaho wenzeka kusihlwa, futhi wawungowokuqala kwiGrand Prix ukuqala ukukhanya kwemini bese uqeda ebusuku. Eminye imidlalo edumile ifaka umjaho wamakamela, i-falconry, ukugibela ukukhuthazela ne-tennis. I-emirate ye Dubai futhi iyikhaya lezigaba ezimbili ezinkulu zegalofu: I-Dubai Golf Club ne-Emirates Golf Club.
I-Islam iyinkolo enkulu kunazo zonke nesemthethweni ye-UAE. Uhulumeni ulandela inqubomgomo yokubekezelela ezinye izinkolo futhi akuvamisile ukuthi angenelele emisebenzini yabangewona amaSulumane. Ngendlela efanayo, abangewona amaSulumane kulindeleke ukuthi bagweme ukugxambukela ezindabeni zenkolo yamaSulumane noma ukukhuliswa kwamaSulumane.
Uhulumeni ubeka imingcele ekusakazeni ezinye izinkolo nganoma yiluphi uhlobo lwabezindaba njengoba lubhekwa njengendlela yokuguqula abantu.
Isi-Arabhu siwulimi lukazwelonke lwe-United Arab Emirates. I-Gulf dialect of Arabic ikhulunywa ngendabuko ngabantu base-Emirati. Njengoba le ndawo yayihlalwa amaBritish kuze kube yi1971, isiNgisi yisisekelo lingua franca e-UAE. Kanjalo, ulwazi lolimi luyadingeka uma ufaka isicelo semisebenzi eminingi yasendaweni.
Amanye amadolobha ezithakazelo I-Al Ain, E-Buraimi, Hatta,
Izindawo Zamasiko we-Al Ain (iHafit, i-Hili, iBidaa Bint Saud Nezindawo Oases)